သမဒအကျန်ပေးကောင်စီဝံ ကြောင်ကြီးနှင့် Chinese Spies | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သမဒအကျန်ပေးကောင်စီဝံ ကြောင်ကြီးနှင့် Chinese Spies
သမဒအကျန်ပေးကောင်စီဝံ ကြောင်ကြီးနှင့် Chinese Spies
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 31, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 14 comments
သမဒဂျီး ဦးသိန်းစိန် အသစ်ဖွဲ့လိုက်သော အမျိုးသား အကြံပေးကောင်စီတွင် ဦးကြောင်ကြီး ပါဝင်နေသည်။ အကြောင်းမူဃား ကြောင်ကတိုးတဂေါင် ဖြစ်သောကြောင့်တည်း…။ သူ့ထံမှ ထွက်လာမည့် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း မြောက်များစွာတန်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမက်၍ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးတွင် မည်သည့်တပါဒမျှ ဦးကြောင် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရန်မလို၊ နေ့စဉ်ကျွေးမွေးသော အစာအဟာရများ တနင့်တပိုးစားပြီး ဝမ်းမှန်မှန်ပါရန်သာ အရေးကြီးလေသည်။ ဦးကြောင် ဝမ်းချုပ်လျင် ကောင်စီတဖွဲ့လုံး မျက်လဲဆန်ပြာ အရေးဘော် အစည်းအဝေး ထိုင်ရလေသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်လျင် သမဒဂျီး ဦးဆောင်၍ ကက်ဘိနက်ဝံကျီးတဖွဲ့လုံး ပါဝင်ပတ်သက် ရသည်။ ထိုမျှ မရလျင်ဂါး ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီ ကာ/လုံ အစည်းဝေးထိုင်ဂါ နိုင်ငံဒေါ်ထိပ်ဆုံး အာဏာပိုင် လူညစ်ကြီးကိုးဂေါင် ဆုံတွေ့ရဒေါ့သည်။ ဦးကြောင်ကြီးဂါး ဤမျှ ဘုန်းကြီးသူတီး။
နေရာတိုင်း၌ လူကောင်း လူဆိုး၊ အမှန် အမှား လောကဓမ္မတာ ရှိသိအားလျော်စွာ သူတော်စင် ကြောင်ကြီးအား မနာလို မကောင်းကြံနေသူ ရှိလေသည်။ ထိုသူဂါး တရုတ်နိုင်ငံ ငါဖို့ ရေအားလျှပ်စစ်ကုမ္မဏီ ပြင်ပဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ ကြေးမုံဂျီးဖြစ်၏။ စီးပွားရေးလောကတွင် သူ၏ အမြီးကျက် အမြီးစား ဂေါင်းကျက် ဂေါင်းစား၊ စားပြီး နားမလည် ဝါးပြီးထွေးထုတ် လုပ်နည်းလုပ်ဟန် လူပြောများသည်။ ကြေးမုံဂျီးနှင့် လက်ဝါးရိုက် ပေါင်းစားသူဂါး ကော်မရှင်နာမြင်းဂျီး ဦးခိုင်ဖြစ်သည်။ တဟီးဟီး တဟဲဟဲနှင့် အကျိုးဆောင်ခ တောင်းလေ့ရှိသဖြင့် ဤသို့ အမည်တွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုမူ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်တန့်နေသဖြင့် မဟီနိုင်တော့။ မအောင်မြင်ဘာဂ စရံယူထားသည် ယူအကစ်ဒေါ်လာတသန်း ပြန်အန်ထုတ်ရမည် မဟုတ်ပါလော။ ထို့ကြောင့် ညဏ်နီညဏ်နက် ညဏ်ဝါညဏ်ပြာ အမျိုးစုံသုံးကာ အွန်လိုင်းဆန္ဒမဲတဖုံ၊ ကွန်းမန့်တသွယ် မြစ်ဆုံရေကာတာ ဖြစ်မြောက်ရေး နေ့ညမအား ကြံစည်အားထုတ်နေသည်မှာ သဂျီးဂဒေါ်ကိုပင် ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဗေ။
ကြေးမုံဂျီးအဖို့ ကြောင်ကြီးနှင့် ဖက်ပြိုင်ရသည်မှာ အတော်ပင် စိတ်မသက်မသာ ရှိလှသည်၊ သူ့အမြင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်ပြည်အစိုးရ ပြုသမျှ နုရမည့် အုပ်ချုပ်ခံ ပြည်နယ်တခု အဆင့်မျှသာ ရှိသောကြာင့်တီး။ ယူနန်ပြည်နယ် စားကျက်မြေ မြန်တကျင့်ဟု ခေါ်ဆိုသော ရွာငယ်ဇနပုဒ်မှ ကြောင်တဂေါင်နှင့် တရုတ်ကူမြူနစ် ပါတီအဆင့်မြင့်ကေဒါတဦး နှိုင်းယှဉ်စရာမဟုတ် တွေးထင်ထားသည်။ သို့သော် ကြောင်ကတိုးဘုန်း မိုးသို့ချုန်း ကြေးမုံဂျီးရှုံး သူသာနုံး ဖြစ်ရသည်။ ကြောင်ကြီးကား ပန်းပန်လျက်ပေတည်း..။ (မယုံလျင် အထောက်အထား ဓာတ်ပုံကြည့်ပါ။)
ပန်းတပွင့် လန်းအစွင့် နမ်းခွင့်ကြုံပါရစေ
အဲဒီ ပန်းပွင့်ထဲက ပုရွက်ဆိတ်အကြီးကြီးထွက်လာပြီး ကိုက်သွားပါစေ
ကြောင်ကို အမဲရောင်အကောင်လေးထည့်ရမှာ ….အဲဒါဆိုပိုကောင်းမယ်…ဟီးဟီး..
တော်ကြာပန်းက ခွေးသေးပန်းဖြစ်နေရင် ဒွတ်ခရောက်နေအုံးမယ် ……
ဂမုန်းနှာချေဆေးသုတ်ပေးလိုက်ပြီ အဲဒီပန်းကို ….ခိခိ
ဦးကြောင် ပန်းကြိုက်တတ်မှန်း .. အခုမှပဲ သိတော့တယ် ဟိဟိ
ဟုတ်ပါ၏. အူးကြောင်ကြီးရေ။သမတဂျီး အကြံပေး များ ဘာအရက်သောက်လျှင်
ကြောင်တော့ ကြောင်ပဲ ပန်းကြိုက်တဲ့ ကြောင်တဲ့။ ကြောင်မှန်ရင် ငါးပဲ ကြိုက်တယ် အထင်……………..
ကြောင် ၀မ်းချုပ်မှုမှ ကင်းပါစေ။ ရှိုရှားရည် နေ့စဉ် တခွက်တိုက်ရန် အကြံပေးပါတယ်။ :D
ငါးကြော်မကြိုက်၊ ပန်းကြိုက် ကြောင် -ိုက်…
ဒါမျိုးတွေ များများ ရေးပေးပါ
ကိုကြောင်ကြီး ခရမ်းရောင် ပန်းကြိုက်မယ်မှန်း
ဖူးကားနေတဲ့ အမေလိကန် ပန်းလေးနဲ့
မြန်မြန်နီးပီ.. အမှန်ဖြီးနိုင်ပါစေ… :D :D :D
အမှန်တော့ ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ ပို့စ်လေးတွေက ခန့်ခန့်လေးနဲ့ ပြုံးရလို့ ရယ်ရလို့ အလွန်ကြိုက်နှစ်သက် ကြောင်းပါ ခင်ဗျာ။ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ပြန်စရေးကို လုပ်ဆောင်နေသော အကျိုးတော်ဆောင်ကြီး အားအမြန်ဆုံး နှိမ်းနှင်းပါခင်ဗျာ။